Maxay tahay sababta keentay in baarlamanka looga yeero wasiirka Dastuurka? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay sababta keentay in baarlamanka looga yeero wasiirka Dastuurka?
Maxay tahay sababta keentay in baarlamanka looga yeero wasiirka Dastuurka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Baarlamaanka Somaliya ayaa waxa ay u yeereen Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Federalka Somaliya Abukaate C/raxmaan Xoosh Jabriil, kadib markii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ay soo gudbiyeen Mooshin arintaasi la xiriirta.
Sida ay sheegayaan wararka Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ugu yeeray wasiir Xoosh inuu Baarlamaanka hor yimaado maalinta Axada ee soo socota.
Mid ka mid ah Xildhibaanadii qoray mooshinka lagu dalbanayo Wasiir Xoosh ayaa sheegay inay ka doonayaan Wasiirka inuu Baarlamaanka hor-yimaado, si ay wax uga weydiiyaan hadalo dhowaan ka soo yeeray
Wasiir Xoosh ayaa loo heystaa qoraal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka, kaasoo uu ku naqdiyay go’aankii Baarlamaanka uu ku diiday amarkii Maxkamadda sare ee ahaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo muran la geliyay sharci ahaanshahooda.